Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay dagaalo ka dhacay Gobolka Mudug. – SBC
Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay dagaalo ka dhacay Gobolka Mudug.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Maxamed Axmed Caalin oo maanta kulan saxaafadeed ugu qabtay Magaalada Gaalkacyo saxafiyiinta gobolkaas ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ka soo laalaabtay ee ka jira deegaanada xadka gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Madaxweynaha ayaa sheegay in arimahani ay noqdeen kuwo soo laalaabta islamarkaana aan loo adkeysan karin, waxaanu sheegay in dadka dagaalamaya ay si deg deg ah dagaalka u joojiyaan oo ay talaabo aan dagaal aheyn qaadaan.
waxa uu intaasi ku daray Madaxweyne Caalin in dagaalada Soconaya oo markii hore ahaa dagaalo beeleed uu u muuqdo iminka mid isku bedelay dhinac Caqiido islamarkaana ay warbaahinta ka sheegeen dhinacyada dagaalamaya mid ka mid ah in ay dileed wax ay ugu yeereen gaalo taasina ay tahay ayuu yiri mid siweyn looga xumaado ayna gaalo wax la yiraahdaa aysan gobolka ku sugneyn.
“Waa wax laga xumaado arintaasi, dadka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan waa Muslin, mana loobaahna wax kala soocaya, hadii ay noqonlaheyd Mid Caqiido, mid Qabiil iyo siyaabo kale” ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caalin.
Madaxweyne Caalin ayaa dhinaca kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay si deg deg ah ku joojiyaan dagaalada dagaalna aanu wiil ku dhalan in uu ku dhinta mooyee, dhankoodana ay wadaan dadaalada lagu joojinayo ayna kala hadleen dhinaca maamulkaas ayna isla garteen sidii loo joojin lahaa dagaalada.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa u diray Tacsi dhamaan intii ku geeriyootay dagaalada dhacay, waxaanu u rajeeyay intii ku dhaawacantay Caafimaad deg deg ah..
Dagaalada ayaa maanta waxa ka dheceen deegaanka Dhagtuur oo 155 KM dhanka Koonfureed ka xiga magaalada Gaalkacyo kaas oo sida ay xaqiijiyeen dad halkaasi ku sugan ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya 15 qof halka dhaawacuna uu sodomeeyo gaarayo.